चीन कप प्रकार सुरक्षात्मक मास्क निर्माता र आपूर्तिकर्ता - Jinyi सुरक्षात्मक
रेडियो अन्तर्वार्ता जानकारी
डिस्पोजेबल सुरक्षात्मक मास्क
कप प्रकार सुरक्षात्मक मास्क
फोल्डिंग प्रोटेक्टिभ मास्क
औद्योगिक धुलो श्वासप्रश्वासक
औद्योगिक केमिकल रेस्पिरेटर
घर > उत्पादनहरू > सुरक्षात्मक मास्क > कप प्रकार सुरक्षात्मक मास्क
डबल ट्याङ्की केमिकल मास्क+सेफ्टी ग्लास
प्लास्टिक धुलो मास्क
डबल ट्यांक डस्ट मास्क + सुरक्षा गिलास
आधा धुलो मास्क KN95 फिल्टर गर्दै
Jinhua Jinyi वेल्डिङ सुरक्षात्मक उपकरण कं, लिमिटेड सुरक्षा उपकरण उत्पादन मा विशेष छ, मुख्य उत्पादन औद्योगिक रासायनिक श्वास यन्त्र, औद्योगिक धुलो श्वास, फोल्डिंग सुरक्षात्मक मास्क, कप प्रकार सुरक्षात्मक मास्क, डिस्पोजेबल सुरक्षा मास्क, औद्योगिक श्वासप्रश्वासक, सुरक्षात्मक मास्क हो। उद्यम पारित भएको छ। राष्ट्रिय ISO9001 प्रणाली प्रमाणीकरण，र धेरै वस्तुहरूसँग CE प्रमाणपत्र छ। वर्षौंदेखि, हाम्रो ब्रान्ड JINYI ले चीनको घरेलु बजारसँगै युरोप, दक्षिण अमेरिका, दक्षिण अफ्रिका, दक्षिणपूर्व एशिया र मध्य-पूर्वमा हामीलाई प्रतिष्ठा कमाएको छ। हामीसँग उन्नत उपकरण र उच्च-टेक प्रतिभा छ, हामी विश्वास राख्छौं कि गुणस्तर हाम्रो अन्तिम खोज हो।
अब दुबै नन-ब्रेथिङ भल्भ मोडेल र कप प्रकारको सुरक्षात्मक मास्कको ब्रीथिङ भल्भ मोडेलले CE प्रमाणीकरण .3 तह डिजाइन प्राप्त गरेको छ। उच्च दक्षता फिल्टर तह, नरम कान ब्यान्ड, समायोज्य नाक क्लिप इम्बेडेड
1. गैर बुनेको तह
Hypoallergenic नरम राम्रो हावा पारगम्यता धुलो रोकथाम र नसबंदी लगाउन सहज
2. PP पिघलिएको
राम्रो हावा पारगम्यता धुलो रोकथाम र नसबंदी
3. एक्यूपंक्चर कपास
कप प्रकारको सुरक्षात्मक मास्कको किनारा मास्कको किनाराको डिलेमिनेशनले गर्दा हुने असुविधाबाट बच्नको लागि घुमाउरो फूलहरूले डिजाइन गरिएको हो।
भित्री र बाहिरी तहहरू नरम पीपी कपडाले बनेको छ ताकि पहिरन आराम बढाउन सकिन्छ
नाक पुलको डिजाइन नाकको आकार अनुसार समायोजन गर्न सकिन्छ, उत्कृष्ट अनुहारको वायुरोधी सुनिश्चित गर्न, र प्रयोगकर्ताको लगाउने इच्छा सुधार गर्न सक्छ।
मास्कको नरम किनारा विभिन्न अनुहार आकारहरूमा फिट हुन्छ र उत्कृष्ट बन्द प्रदान गर्दछ
फराकिलो इयरप्लग डिजाइन, पहिरन कम्फर्ट बढाउनुहोस्। कम्पनीको राम्रो बिक्री मोडेल र बिक्री पछि सेवा नीतिले आयातकर्ता, वितरक, वितरक र थोक बिक्रेताहरूलाई उनीहरूको बजार सेयर द्रुत रूपमा वृद्धि गर्न मद्दत गर्दछ।
FFP2 NR कण फिल्टरिंग आधा मास्क
FFP2 NR पार्टिकल फिल्टरिङ हाफ मास्क: यो मास्कले FFP2 मानक अनुसार युरोपेली CE प्रमाणीकरण प्राप्त गरेको छ, र गैर-मेडिकल मास्क उद्यमहरूको राष्ट्रिय सेतो सूची पारित गरेको छ। हाम्रो कम्पनीले 16 वर्षदेखि मास्कहरू बनाइरहेको छ। यसको स्थापनाको सुरुमा, हामीले गुणस्तरलाई सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण स्थानमा राख्यौं, र राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डहरू अनुरूप कडाईका साथ मास्कहरूको परीक्षण र उत्पादन गर्‍यौं। हामी राम्रो उत्पादनहरू र राम्रो सेवाहरू प्रदान गर्न सक्दो प्रयास गर्नेछौं, ताकि प्रत्येक ग्राहकले सजिलैसँग मास्कहरू किन्न र प्रयोग गर्न सकून्।
FFP2 भल्भको साथ आधा मास्क फिल्टर गर्दै
हामी राम्रो गुणस्तर सस्तो मूल्य FFP2 फिल्टरिंग आधा मास्क भल्भको साथ आपूर्ति गर्दछौं। हाम्रो कम्पनी सबै प्रकारका फेस डस्ट मास्कहरू उत्पादनमा विशेष छ, यो फेस मास्कले युरोपेली संघको मापदण्डहरू पूरा गर्दछ र जर्मनी फ्रान्सेली इटाली हाम्रो मुख्य बजार जस्तै युरोपियन युनियन युरोपेली द्वारा प्रमाणित गरिएको छ। हामी तपाईंको दीर्घकालीन साझेदार चीन बनेको आशा गरिरहेका छौं। हामी तपाईंको सबै मागहरू पूरा गर्न सक्दो प्रयास गर्नेछौं।
FFP2 आधा मास्क फिल्टर गर्दै
हामीले राम्रो गुणस्तरको सस्तो मूल्यमा FFP2 फिल्टरिङ हाफ मास्क उपलब्ध गराउँछौं। हाम्रो कम्पनीले १६ वर्षदेखि मास्कको उत्पादनमा विशेषज्ञता हासिल गरेको, यो मास्कसँग EU CE प्रमाणीकरण छ, EU मापदण्डअनुरूप हाम्रो कम्पनी सबै प्रकारका फेस डस्ट मास्कहरू उत्पादनमा विशेष छ। , युरोपेली जर्मनी जस्तै फ्रान्सेली इटाली हाम्रो मुख्य बजार हो। हामी तपाईंको दीर्घकालीन साझेदार चीन बनेको आशा गरिरहेका छौं। हामी तपाईंको सबै मागहरू पूरा गर्न सक्दो प्रयास गर्नेछौं।
FFP3 सुरक्षात्मक मास्क EN149 CE संग
CE सँग FFP3 सुरक्षात्मक मास्क EN149: CE प्रमाणपत्र भएको FFP3 कप प्रकारको मास्कको 99.9% भन्दा कम फिल्टर प्रभाव। हामी राम्रो गुणस्तर सस्तो मूल्य डिस्पोजेबल सुरक्षात्मक अनुहार मास्क3तह आपूर्ति गर्छौं। हाम्रो कम्पनी सबै प्रकारका फेस डस्ट मास्क उत्पादनमा विशेष छ, युरोपेली जर्मनी जस्तै फ्रान्सेली इटाली हाम्रो मुख्य बजार हो। हामी तपाईंको दीर्घकालीन साझेदार चीन बनेको आशा गरिरहेका छौं। हामी तपाईंको सबै मागहरू पूरा गर्न सक्दो प्रयास गर्नेछौं।
आधा डस्ट मास्क KN95 फिल्टर गर्दै: फिल्टर प्रभाव KN95 कप मास्कको 99.9% भन्दा कम हुँदैन। हाम्रो कम्पनी सबै प्रकारका फेस डस्ट मास्क उत्पादनमा विशेष छ, युरोपेली जर्मनी जस्तै फ्रान्सेली इटाली हाम्रो मुख्य बजार हो। हामी तपाईंको दीर्घकालीन साझेदार चीन बनेको आशा गरिरहेका छौं। हामी तपाईंको सबै मागहरू पूरा गर्न सक्दो प्रयास गर्नेछौं।
हाम्रो कप प्रकार सुरक्षात्मक मास्क सबै चीनमा बनेका छन्, तपाईं हाम्रो कारखानाबाट उत्पादनहरू किन्न ढुक्क हुन सक्नुहुन्छ। Jinyi प्रोटेक्टिभ चीनमा व्यावसायिक कप प्रकार सुरक्षात्मक मास्क निर्माता र आपूर्तिकर्ताहरू मध्ये एक हो। तपाईं तिनीहरूलाई हाम्रो कारखानाबाट सस्तो मूल्यमा किन्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो कारखानाले अनुकूलित सेवाहरू प्रदान गर्दछ, त्यसैले उत्पादनहरू स्टकमा छन्। यदि तपाईं छुट र नि: शुल्क नमूना चाहनुहुन्छ भने, हामी तपाईंलाई मूल्य सूची पनि प्रदान गर्न सक्छौं। हाम्रा सबै उत्पादनहरूसँग सीई प्रमाणपत्रहरू छन्। हामी उच्च गुणस्तर र कम मूल्य उत्पादनहरु संग ग्राहकहरु प्रदान गर्न सक्नुहुन्छ। थप जानकारीको लागि, अब हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस्।
ठेगाना: Zhangjia गाउँ, लुओडियन टाउन औद्योगिक क्षेत्र, Wucheng जिल्ला, jinhua शहर, zhejiang प्रान्त
हाम्रो सुरक्षात्मक मास्क, औद्योगिक रेस्पिरेटर, फिल्टरिङ हाफ मास्क, आदि बारे सोधपुछको लागि। वा मूल्यसूची, कृपया हामीलाई तपाईंको ईमेल छोड्नुहोस् र हामी 24 घण्टा भित्र सम्पर्कमा हुनेछौं।
सक्रिय रूपमा उत्पादन उपकरण र उत्पादन लाइनहरू समायोजन गर्नुहोस्।2021/07/27
Zhejiang टिभी स्टेशन "नयाँ दृष्टिकोण एक्सप्रेस" रिपोर्ट गरे कि Jinhua Jinyi वेल्डिंग संरक्षण उपकरण सक्रिय रूपमा यसको उत्पादन उपकरण र उत्पादन समायोजन ...
सांघाई अन्तर्राष्ट्रिय आपतकालीन र महामारी रोकथाम सामग्री प्रदर्शनी।2021/07/27
अगस्ट 11, 2020 मा, हाम्रो कम्पनीले आपतकालीन र महामारी रोकथाम सामग्रीको सांघाई अन्तर्राष्ट्रिय प्रदर्शनीमा भाग लियो। सुरुमा..
नबुनिएको प्रिन्टेड मास्क लामो समयसम्म धेरै पटक प्रयोग गर्नु हुँदैन।2021/07/25
मास्क लगाउनाले हानिकारक ग्याँस, गन्ध, थोपाहरू भित्र पस्न र बाहिर निस्कन र लगाउनेको मुख र नाकलाई रोक्न सक्छ। नबुनिएको मास्कमा निश्चित...
मास्क को वर्गीकरण।2021/07/25
सर्जिकल मास्क: यसले5माइक्रोन कणहरूको 90% भन्दा बढी ब्लक गर्न सक्छ र हरेक दिन प्रतिस्थापन गर्नुपर्छ, तर यो क्षतिग्रस्त भएमा तुरुन्तै प्रतिस्थापन गर्नुपर्छ।
प्रतिलिपि अधिकार © 2021 Zhejiang Jinyi सुरक्षात्मक उपकरण कं, लिमिटेड। सबै अधिकार सुरक्षित।